I-china Carbide Radius Scraper yabakhiqizi be-Edgebander nabaphakeli | Xinhua
I-Edge banding carbide scraper yokuphula imiphetho, ukushelela amajika nokuhlanza imiphetho emincane yepulasitiki. I-carbide eqinile iqinisekisa ukuqina okukhulu nokumelana nokugqoka. Smooth ukungapheleli okwenziwe ngabasiki ngesikhathi senqubo yokuhambisa ngamasentimitha amathathu enzelwe i-1mm, 1.5mm kanye ne-2mm radii. Sebenzisa i-scraper ukuze uqinisekise ukusikeka kokubhinca komphetho wepulasitiki.
Sinesitoko sezinhlobonhlobo zemimese yokusika eqondile ye-carbide eqondile ne-radius kanye nokufakwa okushubile kwazo zonke izinhlobo namamodeli we-Edgebander.
Inkampani yethu ineminyaka engaphezu kwengu-20 yomlando wokukhiqiza amathuluzi okusika we-tungsten carbide, agxile ekukhiqizeni imimese eguquguqukayo ye-tungsten carbide kanye nokufakwa okuhlukahlukene kwe-carbide.
Ingaphezu kwengxenye yemikhiqizo ithunyelwa eYurophu, e-United States nakwamanye amazwe athuthukile nezifunda. Ukusebenza komkhiqizo kuhlangabezana ngokugcwele nezidingo eziqinile zemishini ehlukahlukene ye-edgebander. Ikhwalithi yomkhiqizo isendaweni ehamba phambili ezigabeni zemakethe zamathuluzi ezifuywayo nakwamanye amazwe.
Ubukhulu obuningi noma uMkhiqizo owenziwe ngezifiso uyatholakala, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi
Langaphambilini Iphiko le-2-wing Cutter Head Carbide Faka Imimese
Olandelayo: Carbide kukanxande Woodworking imimese Reversible nge 2 Izimbobo
carbide amathuluzi wokubaza